भारतिय मिडियासँग कुरा गर्दै सरिता गिरिले नेपाल र चिनको सम्बन्धमा लगाईन गम्भीर आ’रोप,,हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
भारतिय मिडियासँग कुरा गर्दै सरिता गिरिले नेपाल र चिनको सम्बन्धमा लगाईन गम्भीर आ’रोप,,हेर्नुहोस!
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरि फेरि पनि विवादमा तानिएकी छिन् । उनी सिमा विवादको विषयमा संसदमा विपक्षमा छिन् । उनी भन्छिन् “सिमा विवादसँग राष्ट्रियता जोडिएको हुन्न , यो दुबै देशको वार्ताबाट समस्याको ह’ल गर्नु पर्दछ ।”
पत्रकार ॠषी धमलासँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम बोल्दै सांसद सरिता गिरिले भनिन् , ” लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरामा म पनि असहमती छु ।” तर सबै दलका नेता र नेपाली जनताले भन्छन् यो नेपालको भुभाग हो , थियो र रहनेछ ।
नेपालसँग अनेकौं प्रमाण छन् यी भुभाग नेपालको भन्ने कुरामा तर भारतले भने यो नेपालको नभएर भारतको नै हो भनी बताउदै आएको छ । सांसद गिरी भारतको पक्षमा हो भन्ने कुरा सबैले सोहोजै अनुमान र आँकलन गर्न सकिन्छ ।
गिरीले भनेकी थिन “नेपालले भारतलाई नसोधी राजनीति नक्सा निकाल्नु युद्व निम्त्यानु हो “! यसै भनाईबाट सांसद गिरी विवादमा आएकी हुन् । उनीले संशोधन विधेयकको पक्ष नलिए पनि सबैको सहमतीमा नक्सा पास भएको छ ।
नेपालले नक्सा पास गर्दै गर्दा गिरीले असहमति जनाएर संसद भवनबाट नै बाहिरिएकी थिन । त्यहाँबाट झनै विवादमा तानिएकी गिरीलाई समाजवादी पार्टी नेपालले साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारबाही गर्ने भन्ने खबर सनसनीपुर्ण रुपमा आईनै रहेका छन् ।
सांसद गिरिले आज बिहान भारतिय मोडिया टिभी -९ भारतबर्षमा अन्तरवार्ता दिदैं नेपालको बारेमा गम्भीर आरोप लगाएकी छिन् । उनीले मिडियासँग कुरा गर्दै भनिन ,”नेपालले भारतको सिमामा मात्र विवाद देख्नु र चिनको पक्षमा नदेख्नुमा अचम्मीत छु । उनी फेरि भन्छिन् ,” नेपालका सांसदहरु भारतको बिरुद्व मात्र बोल्छन् तर चिनको बारेमा बोल्न मुख कमाउँछन।
मिडियाकर्मीसँग कुरा गर्दै , सांसद गिरीले भन्छिन् , नेपालले चिनसँग विकासको कार्यसँग सम्झौता गरेको छ त्यसैले बोल्दैन । उनीले गम्भीर आरोप लगाउँदै भनेकीछिन ,”नेपालको कम्युनिस्ट र चिनको कम्युनिस्ट मिलेका छन् त्यसैले भारको बिरुद्वमा बोल्छन् ।
उनी भावुक हुँदै भन्छिन ,” नेपालको संसद भवनमा म मात्र एकल हुँ सिमा विवाद सम्बन्धमा वार्ता गरि निचोड निकालौं भन्ने तर अन्यले लिम्पियाधुरा , लिपुलेक र कालापनी नेपालको नै हो भन्छन् ।”
सांसद गिरिले भारतिय मि’डियाकर्मीलाई जानकारी दिदैं नेपाल र चिनको सम्बन्धमा फाँंटो नआएको र विकासको बारेमा सम्झौता भई रहेको भनी जानकारी दिएकी छिन् ।
आफ्नो देशको आन्तरिक मामलाको विषयमा भारतिय भिडियासँग सनसनी पुर्ण अन्तर्वार्ता दिएसी उक्त अन्तर्वार्ता भाईरल भएको छ र पुन गिरिको आलोचना सर्वत्र हुँदै आएको छ । जनता भन्छन् ,” गिरीको हरेक अभिव्यक्ति भारतको पक्षमा छ त्यसैले कारबाही गरौं ।
Previous अदालतमा आफ्नो प्रेमको बरेमा बोलिन सुष्मा, ६ जनाको ह’त्या बारे दिइन स’नसनीपूर्ण बयान…हेर्नुहोस्। !
Next सदैव सेवामा समर्पित भोजपुर हातेमालो सेवा समाज युएइद्वारा रा’हत बितरण,,,हेर्नुहोस!